I-3 ebanzi ebanzi ene-balcony. Amakamelo okulala anombhede ophindwe kabili kanye nombhede ongu-120 cm, umatilasi womoya nawo uyatholakala uma uthanda. Imizuzu emi-3 ukuya esitimeleni, cishe imizuzu engama-30 ukuya eStockholm Central.
Västerhaninge, Stockholms län, i-Sweden
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Emma
U-Emma uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Indawo yokuhlala eyimizuzu engama-30 ukuya eStockholm central ngesitimela kodwa futhi eduze neqoqo leziqhingi. Kunezikebhe ezimbalwa ezisuka e-Stockholm ukuya e-archipelago noma ugibele ibhasi ukusuka esiteshini i-Västerhaninge ukuya e-Årsta havsbad, ukuya e-Utö, isitimela esithatha cishe i-30 Nynäshamn.
Igceke lilungele izingane, kuvulandi ubheke egcekeni.
Ifulethi libanzi futhi lingahlalisa abantu abangaphezu kuka-4 uma lifunwa. Ilineni lombhede namathawula njll. ulethelwa wena, uyatholakala ukuze uqashwe uma kudingeka ngemali ekhokhwayo.
Indawo yokuhlala kufanele ihlanzwe lapho usuphuma